Abaaraha, dagaallada iyo saboolnimada oo carruurta ku qasba inay shaqeeyaan
Photo | Wiil garaash ka shaqeynaya/CaliNuur Salaad/Ergo
Radio Ergo 13 June, 2017 MUQDISHO
(ERGO) - Maxamed Cabdi Xuseen oo 13 jir ah $30 oo uu dhamaadkii bishii hore u diray ayaa ah dhaqaalaha keliya ee uu ku noolaan karo qoyskiisa oo ku sugan degmada go’doonsan ee Qansaxdheere ee gobolka Bay. Wiilkan oo curad u ah reerkiisa ayaa muddo bil ah ka shaqeeya maqaayad ku taalla degmada Xamarweyne, wuxuuna halkan u yimid si uu u daboolo kaalinta uu banneeyay aabbihiis oo lix bilood ka hor u tahriibay dalka Yemen, kaas oo aan nolol iyo geeri lagu heyn.
Qoyska Maxamed oo ku tiirsanaa beeraha intii aysan abaarta saameyn wuxuu ka kooban yahay hooyadiis iyo lix gabdhood oo ka yar. Qansaxdheere waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka ee uu sida wanaagsan uga da’ay roobka gu’ga, laakiin reerku ma haysto lacag uu abuur ku iibsado. Cunto-la’aan ayaa ku haysata meeshaas oo aan gargaarka bani’aadannimo lala gaarsiin karin go’doominta Al-Shabaab.
Maxamed oo aan lahayn maalin uu nasto wuxuu marka ay ugu yar tahay shaqeeyaa toban saacadood oo ka billaabaneysa toddobada aroornimo. Wuxuu maqaayadda u qaabilsan yahay qeybta nadaafadda iyo inuu miisaska ku diyaariyo garaafooyin ay ku jiraan biyaha caadiga ah iyo koobabkooda. Waxaa lagula heshiiyay inuu maalintii qaato 40,000 oo shilin Soomaali ah ($2), balse waxaa laga jaraa 15,000 oo shilin si uu isaga yaryareeyo lacagta uu bishii hore u diray qoyskiisa. Inta soo hartay ayuu $1 meel u sii dhigaa si uu u diro bisha kale.
Lacagta u soo harta aad bay u yar tahay, inkasta oo qadada iyo quraacda uu si bilaash ah uga cuno maqaayadda, haddana kuma wada filna baahiyihiisa kale iyo gaari-raaca. Wuxuu u hoydaa xerada lagu barakacay ee Eentoy ee degmada Dayniile oo uu kula nool yahay dad ay isku yaqaanneen Qansaxdheere, taas oo aad uga fog meesha uu ka shaqeeyo. Inta badan wuu lugeeyaa. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in xitaa lacagta uu qoyskiisa u diro aysan wada dabooli karin baahidooda, laakiin ay tani tahay habka keliya ee uu awoodi karo inuu ku caawiyo.
Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu Nofeembar 2014 ansixisay sharciga ilaalinta xuquuqda carruurta, kaas oo mamnuucaya in lagu shaqeysto carruur ka yar 18 sano. Hase yeeshee agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cadde Mukhtaar ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in duruufaha dalka ka jira ee ka dhashay colaadaha iyo saboolnimada ay adkeynayaan in la dhaqangeliyo sharcigaas. Sidaas oo ay tahay wuxuu xusay in aysan ka quusan doonin ilaalinta xuquuqda carruurta.
Carruurta shaqeysa waxay mararka qaar kala kulmaan tacaddiyo lagu duudsiinayo xuquuqdooda. Abshir Salaad Cali oo ah 12 jir gaadiidka dhaqa ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in mararka qaar ay ku dhacdo inay lacagta u diidaan dadka uu gaariga u dhaqo. “Shaqadan waa mid adag oo haddana cabsi badan maaddaama ay qaraxyo ka dhacaan waddooyinka hareerahooda, sidaas oo ay tahay waxaan xadgudubyo kala kulannaa macaamiisheenna,” ayuu yiri.
Wiilkan wuxuu la nool yahay walaashiis oo afar jir ah iyo labadiisa waalid oo deggan xerada Weydow ee duleedka Muqdisho, kuwaas oo ku tiirsan lacag dhan 84,000 oo shilin ($4) oo uu soo helo maalinta ugu fiican. Waxay saddex bilood ka hor ka soo barakaceen degmada Kurtunwaarey ee gobolka Shabeellaha hoose, kaddib markii ay colaado soo noqnoqday u saamixi waayeen inay wax soo saarka beertooda ka faa’ideystaan.
Sagal Cali Maxamuud oo qeybta carruurta u qaabbilsan hay’adda Tubta Toosan ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in lixdii bilood ee la soo dhaafay magaalada laga dareemayo kororka carruurta shaqeysa. Qoysas badan oo abaarta ay ku saameysay deegaannadooda ayaa ku muddadaas ku biiray xeryaha. Waxay tilmaantay in ay adag tahay in tirakoob sugan lagu sameeyo carruurta shaqeysa, laakiin 617 qoys oo ka tirsan dadka ay la kulmeen ay u sheegeen in ay u shaqeeyaan carruurtooda.